Mpilalao tenisy aostraliana malaza, maherifon'ny angano | Fitsangatsanganana tanteraka
Louis Martinez | | Nohavaozina tamin'ny 21/10/2020 11:41 | Aostralia
Ireo mpilalao tenisy aostraliana malaza indrindra dia nahavita ny fireneny a hery lehibe amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny raketa. Tsy nandeha lavitra intsony ireo ekipa nisolo tena an'i Aostralia nandresy tamin'ny valo amby roapolo malaza Kaopy Davis, izay firenena faharoa manerantany manana ny anaram-boninahitra betsaka indrindra aorian'ny Etazonia.
Ho fanampin'izany, maro amin'ireo mpilalao tenisy aostralianina malaza indrindra no nahatratra ny tampon'ny laharan'ny Fikambanan'ny mpilalao tenisy matihanina ary nandresy tamin'ny fifaninanana lehibe eran-tany izy ireo toa Wimbledon en Londres na ny US Open. Raha te hihaona amin'ireo tompon'ny rakotra ireo ianao dia manasa anao hanohy hamaky.
1 Ireo mpilalao tenisy aostraliana malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra
1.1 Rod Laver, ny tsara indrindra hatramin'izay
1.2 Ken Rosewall, "Mpampianatra Kely ao Sydney"
1.3 Margaret Court, mpilalao tenisy aostraliana malaza indrindra teo amin'ny tantara
1.5 John Newcombe sy ny tolona ho an'i Roland Garros
1.6 Evone Goolagong ary vehivavy mpiara-miasa tenisy aostraliana malaza indrindra
1.7 Lleyton Hewitt, mpilalao mendrika farany tamin'ny tenisy aostralianina
1.8 Patrick R After, ny firaketana mahaliana indrindra
1.9 Ashleigh Barty, zandriny indrindra amin'ireo mpilalao tenisy aostralianina malaza indrindra
1.10 Nick Kyrgios, ankehitriny sy ho avy amin'ny tenisy aostralianina
Ireo mpilalao tenisy aostraliana malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra
Araka ny efa nolazainay, i Australia dia iray amin'ireo hery lehibe teo amin'ny tontolon'ny tenisy nandritra ny am-polony taona maro. Ambonin'izany rehetra izany dia niaina tamin'ny vanim-potoana volamena tamin'ny taona XNUMX sy XNUMX. Saingy talohan'izay sy taorian'izay koa dia nisy tompon-daka lehibe Aostralianina. Andao hofantarina izy ireo.
Rod Laver, ny tsara indrindra hatramin'izay
Teraka tao Rockhampton, Queensland, tamin'ny 9 aogositra 1938, izy no raisina ho mpilalao tenisy aostralianina tsara indrindra teo amin'ny tantara. Raha ny marina dia izy irery no mpilalao nandresy tamin'ny fifaninanana Grand Slam efatra tamin'ny taona sy indroa ihany: ny taona 1962 sy 1969.
Nandritra ny asany dia nandresy tamin'ny fifaninanana 184 izy ary, na dia tsy voalohany tao amin'ny laharana ATP aza izy, satria tsy nisy hatramin'ny 1973, dia noheverina ho mpilalao mahay indrindra eran-tany izy nandritra ny taona maro. Eo amin'ny làlana dia mailaka be izy, niaraka tamin'ny fitokonana mahery vaika na dia niavaka ho azy aza izy voadona tampoka. anaram-bosotra "The Rockhampton Rocket", nisotro ronono tamin'ny 1979.
Busts an'i Rod Laver sy Mal Anderson
Ken Rosewall, "Mpampianatra kely an'i Sidney"
Na dia marefo aza ny endriny (nomena anaram-bositra koa izy «Hozatra» mampihomehy) ary na dia tsy nahazo kapoka mafy dia mafy aza izy, Rosewall dia iray amin'ireo mpilalao tenisy tsara indrindra tamin'ny fotoana rehetra. Nanonitra ny tsy fahampian'ny hery izy tamin'ny fivezivezena sy fahaizan'ny mandao, mandray ny hanova ny fitaovam-piadiany lehibe.
Nandritra ny asany dia nandresy izy inefatra ny Australian Openraha mbola mikapoka indroa ao amin'ny Roland Garros sy US Open. Izy koa dia nandray anjara tamin'ny fireneny tamin'ny fanatanterahana ny kaopy Davis efatra, ny roapolo taona lasa izay mba hampifanditra ny voalohany. Nalaza teny an-dàlana ihany koa izy noho ny fahaizany mitahiry vola ary nisotro ronono tamin'ny 1980.
Margaret Court, mpilalao tenisy aostraliana malaza indrindra teo amin'ny tantara
Teraka tao Albury tamin'ny 16 Jolay 1942, azo raisina ho mpilalao tenisy vehivavy tsara indrindra any Aostralia izy nandritra ny tantara ary na dia iray amin'ireo miavaka indrindra eto an-tany aza. Izy no mitazona ny firaketana tanteraka ho an'ny fifaninanana Grand Slam nandresy tamin'ny efatra amby roapolo. Anisan'izany, iraika ambin'ny folo amin'ny Open Australia, in-dimy ny Roland Garros, in-telo ny Wimbledon ary in-dimy ny United States Open.
Mazava ho azy, ireo amin'ny sokajy isam-batan'olona, ​​satria tamin'ny gadona roa sy indroa mifangaro dia nahazo azy rehetra imbetsaka koa izy mba hamitana totalin'ny fifaninanana Grand Slam efatra amby enimpolo. Raha ny marina dia izy irery no mpilalao tenisy teo amin'ny tantara izay nahazo ny anaram-boninahitra rehetra azo tamin'ireto fifaninanana ireto. anaram-bosotra «The Amazon», nisotro ronono tamin'ny 1977.
Teraka tao Brisbane izy tamin'ny 30 martsa 1984. Mpilalao mpilalao roa mahafatifaty mahatalanjona izy, namorona mpivady mahafaty niaraka tamin'ny Amerikana Avaratra. Lisa raymond. Nandresy tamin'ny United States Open tamin'ny taona 2005 izy ireo ary ny fifaninanana Wimbledon tamin'ny 2006, na dia nandresy tamin'ny Australian Australian Open niaraka tamin'ny mpiara-miasa iray hafa aza ny Stosur. Shuai zhang.
Fa ilay aostraliana koa dia mpilalao tokana mahafinaritra. Amin'ity taranja ity dia nandresy ny US Open tamin'ny 2011, ary koa fifaninanana WTA sivy tahaka ilay iray Osaka (intelo) na an'ny Charleston.
John Newcombe sy ny tolona ho an'i Roland Garros
Toa an'i Rosewald dia teraka tany Sydney tamin'ny 23 may 1944. Miaraka amina fanatanjahantena mahery vaika sy mahery vaika izy no mpilalao tenisy aostralianina lehibe farany tamin'ny taona XNUMX sy XNUMX. Nandritra ny asany dia nandresy izy Fifaninanana lehibe fito an'ny Grand Slam: intelo Wimbledon ary indroa ny Open of the United States and Australia.
Na izany aza, tsy afaka nandresy mihitsy izy tao Roland Garros, izay tsy nahalany ny ampahefa-dalana, na dia indroa aza izy no nanao izany teo amin'ny sokajy roa miaraka amin'ny mpiray tanindrazana aminy Tony roche ary manakaiky ny vavahady Tom okker. Ny mpivady noforoniny tamin'ny voalohany no dinihina iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Tsy natao tsinontsinona, nandresy izy ireo fifaninanana Grand Slam roa ambin'ny folo. Toy izany koa, nandray anjara tamin'ny fahazoana ny fireneny izy kaopy Davis dimy. Karismatika mahery ary miaraka amina toetra iray foana moustache, voalaza fa niantohana $ 1981 tapitrisa, dia nisotro ronono tamin'ny XNUMX.
Evone Goolagong ary vehivavy mpiara-miasa tenisy aostraliana malaza indrindra
Teraka tany Griffith, New South Wales, tamin'ny 31 Jolay 1951, izy dia iray tamin'ireo mpilalao tenisy lehibe tamin'ny taona XNUMX sy XNUMX. Amin'ny sokajy tsirairay dia nandresy izy efatra aostralianina manokatra, Roland Garros y Wimbledon roa. Saingy tsy afaka nandresy mihitsy izy teo amin'ny US Open, izay resiny tamin'ny lalao famaranana telo, ka ny iray tamin'izy ireo dia ny mpiray tanindrazana aminy. Fitsarana Margaret, izay efa noresahinay taminao sy amin'iza izy io mpivady roa taona maro. Nisotro ronono izy tamin'ny 1983.
Lleyton Hewitt, mpilalao mendrika farany tamin'ny tenisy aostralianina
Ny talenta tenisy aostraliana farany farany dia teraka tao Adelaide tamin'ny 24 febroary 1981 ary niaina tamin'ny androny tamin'ny fiandohan'ity taonjato ity. Tamin'ny 2001 dia nandresy ny US Open ary tamin'ny 2002 ny fifaninanana wimbledonary koa ny ATP World Tour amin'ny roa taona. Ho fanampin'izay, manana titre Masters 1000 roa izy, lohateny ATP 500 roa ary roa ATP 250 lohateny.
Izy koa no nitazona ny laharana voalohany amin'ny laharan'ny fikambanan'ny mpilalao tenisy matihanina mandritra ny valo-polo herinandro. Raha ny marina, dia ny mpilalao tanora indrindra nahatratra izany toerana izany, hatramin'ny nanaovany an'izany tamin'ny roa-polo taona sy valo volana. Ary izy koa no zandriny indrindra nandresy tamin'ny fifaninanana ATP. Ny an'ny Adelaida tamin'ny 1998, enina ambin'ny folo taona sy folo volana monja. Rehefa avy nandany fizaran-taona maro hisintonana ratra izy dia nisotro ronono tamin'ny 2016.
Patrick R After, ny firaketana mahaliana indrindra
Teraka tao Mount Isa, Queensland, ny 28 desambra 1972, i R After dia manana rakitsoratra mahaliana. Efa mpilalao izany Ny fotoana vitsy dia naharitra tamin'ny laharana voalohany tamin'ny laharan'ny laharan'ny Association of Professional Professional Tennis players. Ary ilay izy ihany no nibodo azy iray herinandro mg 1999.
Saingy tsy midika izany fa mpilalao mediocre izy. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy. Raha ny marina dia nandresy roa taona nifanesy (1997 sy 1998) ny US Open ary niady hevitra tamin'ny lalao famaranana roa tamin'ny Wimbledon. Ankoatry ny, nandrombaka ny ATP Masters Series tany Canada sy Cincinnati, ary koa ireo fifaninanana kely hafa.
Nisotro ronono izy tamin'ny 2002 raha mbola nitana ny laharana fahafito tamin'ny filaharana ATP taorian'ny ratra mafy nahazo azy ary resy tamin'ny teniny manokana fa liana amin'ny filalaovana tenisy matihanina.
Ashleigh Barty, zandriny indrindra amin'ireo mpilalao tenisy aostralianina malaza indrindra
Ity mpilalao ity no zandriny indrindra amin'ny lisitray satria teraka tany Ispwich, Queensland izy tamin'ny 24 aprily 1996. Ary, nahagaga fa teo am-piandohan'ny aza milalao intsony alohan'ny hidirany amin'ny Lalao Olaimpikan'ny mpilalao tenisy aostraliana malaza indrindra.
Tamin'ny 2014, taorian'ny nanesorana azy tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny US Open dia nanapa-kevitra ny hiala amin'ny tenisy izy hilalao amin'ny ligin'ny matihanina lalao cricket avy any Aostralia. Vao 18 taona izy ary soa ihany fa 24 volana taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hiverina amin'ny taranja fanatanjahan-tena izy.
Nanomboka teo dia tsy nitsahatra nitombo izy tamin'ny naha-mpilalao tennis. Nandresy tamin'ny fifaninanana WTA toa ireo tany Kuala Lumpur, Nottingham ary Zhuhai amin'ny sokajy tsirairay. Ary koa, fananganana mpivady amin'ny Amerika Avaratra Coco vandeweghe Won Grand Slam voalohany nataony tamin'ny roa. Tao amin'ny US Open amin'ny 2018.
Fotoana fohy taorian'izay dia niditra tao amin'ny tampon'ny 10 ny fanasokajiana mpilalao tenisy vehivavy ary, efa tamin'ny taona 2019, nahazo ny fandresena lehibe indrindra izy hatreto: ny Roland Garros nandresy ny Czech tamin'ny lalao famaranana Marketa Vondrousova. Noho io ary ny fandreseny tany Birmingham taorian'izay dia nahatratra ny laharana voalohany ny laharana voalaza etsy ambony. Izy no mpilalao aostraliana faharoa nanao izany, taorian'iny Evonne goolagong, izay efa nolazainay taminao.
Nick Kyrgios, ankehitriny sy ho avy amin'ny tenisy aostralianina
Toy ny teo aloha dia mbola mavitrika ihany izy satria dimy amby roapolo taona monja (teraka tamin'ny 27 aprily 1995 tany Canberra) izy, saingy efa isan'ny mpilalao tenisy aostraliana malaza indrindra izy. Nanjary fanta-daza izy tamin'ny 2013 rehefa nandresy tamin'ny Australian Open tamin'ny sokajy tanora.
Efa matihanina izy dia nanolotra ny mari-pahaizana tamin'ny 2014 tamin'ny fandresena Rafael Nadal tamin'ny dingana nandondonana an'i Wimbledon fony izy mbola tsy roa-polo taona. Nanomboka teo dia lasa iray amin'ireo fampanantenan'ny tenisy eran-tany izy. Ary, na dia mbola tsy nahazo Grand Slam aza dia efa nahazo izany anaram-boninahitra ATP World Tour 500 Series isan-karazany tahaka ilay iray Tokyo, Acapulco na Washington, ary koa ny ATP World Tour 250 Series hafahafa.
Ho famaranana, ireo no mpilalao tenisy aostralianina malaza indrindra teo amin'ny tantara. Maromaro amin'izy ireo no efa misotro ronono efa ela, ny hafa kosa mbola mavitrika. Saingy ny rehetra dia nandray anjara tamin'ny atsangano ny angano an'ny tenisy mahafinaritra ao amin'ny fireneny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Mpilalao tenisy aostraliana malaza
Ireo teatra malalaka amin'ny habakabaka grika
Nanao ahoana ny toetran'ny egyptiana taloha